Maxaad ka ogtahay Shaqooyinka suuqooda uu sii yaraanayo? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Maxaad ka ogtahay Shaqooyinka suuqooda uu sii yaraanayo?
Maxaad ka ogtahay Shaqooyinka suuqooda uu sii yaraanayo?
Shaqooyin badan gaar ahaanna kuwooda aadka u adag ee aan hadda ka hor la fileyn in si fudud lagu qabto ayaa la sheegayaa 10-15-ka sana ee soo socda iney beddelaan teknooloojiyadaha casriga ah ee dunida ku soo badanaya.
Buugga caanka ah ee uu qoro John Puliano cadadkiisa bishan uu soo saaray boggiisa hore ayuu ku qoray maqaal uu cinwaan uga dhigay “waxaa soo socda mashiinno (Robots)”.
BBC oo Puliano wareysi la yeelatay ayaa wuxuu u sheegay marka uu dhinacya badan ka fiiriyey sida xowliga ee ay dunida teknooloojiyadaha iyo Robot-yada ugu soo badanayaan uu saadaaliyey shaqooyin qaar oo waagi hore cuslaa iney teknooloojiyadaha cusub mudda gaaban khadka kaga saari karaan.
Run ahaantii ma aha ayuu yiri warkan mid ku cusub dhagaha dad badan oo dunidan ku nool balse waxaan shaki ku jirin shaqooyin badan iney mustaqbalka halis badan ku soo wajahan tahay.
Dhakhaatiirta iyo Sharci yaqaannada xirfadahooda iney teknooloojiyadaha cusub si toos ah ula wareegin wey dhici kartaa balse shaqooyinka kale ee la halmaala ayey khatar weyn ku soo fool leedahay” ayuu leeyahay.
Xirfadaha mustaqbalka suuqa yeelan doono ee aadka looga baahan doono waxaa ka mid ah xirfadlayaasha ka shaqeeya amniga Kombiyuutarrada (cyber security) maadaamaa dhibaatada ugu weyn ee teknooloojiyadaha casriga saameynta ku hayso ay tahay weerarrada aaladaha casriga ah siyaaba kala duduwan looga geysto” ayuu yiri.
Qoraaga wuxuu intaa ku darayaa shaqooyinka aadka looga baahan doono iney ka midka yihiin cilmi nafsiga (psychology), la taliyeyaasha cafimaadka maskaxda iyo xirfadaha la midka ah.
Wuxuuna qoraagu xirfadlayaasha mustaqbalka xagga teknooloojiyadda saameynta kala kulmi doono oo ay dhici karto qaarkood iney suuqa ka baxaan wuxuu u dhigay sidan:
Inkasta oo ay adagt tahay marka dhinacya badan laga eego iney dhacdo in si buuxda looga kaaftoomo dhakhaatiirta oo ay dhaqaatiirtu teknooloojiyadaha cusub beddelaan haddana wuxuu qoraaga leeyahay maadaamaa waddamada xagga teknoolloojiyadda ku hormaray caafimadkooda lagu daryeelo teknooloojiyada casri ah ay yaraaneyso doorka dhakhaatiirta ay ku lahaan doonaan mustaqbalka.
Sharci yaqaannada inta badan ay waaya aragnimadooda ku saleysan tahay buugga iyo warqadda oo aan aqoon dheer u lahayn teknooloojiyadaha ka saacidayo howlaha sharciga la xiriiro ay yaraaneyso baahida loo qabi doono ayna dhici karto iney suuqa kaba baxaan
Xirfaddan oo ay inta badan bartaan ardayda fahanka ah gaar ahaan kuwooda ku wanaagsan xisaabta, haddana wuxuu Puliano leeyahay maadaamaa maanta naqshadda dhismo ee aad rabto aad khadka bilaash ama qiima jaban kaga heleyso waxaa iyaguna yaraaneyso xirfadlayaasha suuqa ay yeelan doonaan oo teknoolijiyadda cusub uu ugu horreeya interneetka yaa suuqa ka saaraya.
Waxaana suuqa ku sii jiri kara oo keli ah ayuu leeyahay xirfadlayaasha fikradaha iyo hal abuurka naqshadeynta dhismayaasha cusub la yimaaddo oo keli ah iney badbaadi karaan.
Xirfadlayaasha dhinaca xisaabaadka bartay ee ka duwan kuwa caadiga ah ee u shaqeeya si ka duwan xirfadlayaasha caadiga ah wey dhici kartaa iney suuqa ku jiraan balse qoraaga wuxuu leeyahay kuwa xisaabaadka caadiga ah ee la wada garanayo ka shaqeeyo ay mustaqbalka dhaw suuqa ka bixi doonaan.
Fursadaha shaqo iyo baahida loo qaba duuliyeyaasha diyaaradaha dagaalka waxaa loollan adag ku ah diyaaradaha dagaalka ee duliye la’aanta ah oo dunida ku soo badanaya, iyada oo teknooloojiyadhaasi iney sii bataan mooyee aan hoos u dhac laga fileyn taasina ay yareyneyso fursadaha shaqo ee duuliyeyaasha diyaaradaha dagaalka.
Xirfadlayaashan iyaga marnaba lagama maarmayo laakiin, waxaa marba marka ka sii dambeysa yaraaneyso baahiyaha loo qabo xirfadahaasi, maadamaa waddamada ku hormaray dhinaca teknooloojiyadda ay xoogga saarayaan dambiyada inta ay dhicin in laga sii hortago iyaga oo adeegsanaya teknooloojiyada casri ah.
Dillaalnimadana waxaa loollan adag ku haya shabakadaha isgaarsiinta kala duduwan oo adiga oo gurigaaga fadhiya wax weliba oo aad u baahato kuu soo bandhigo si toos ahna khadka aad uga iibsan kartid taasoo meesha ka saareyso tiradii badneyd ee dillaaliinta lug iyo gaadiidba adeegsan jiray ee habka dhaqamiga ah u shaqeyn jiray.
Xirfadaha aan kor ku soo sheegnay oo la saadaalinayo iney sii dabar go’ayaan ama ay ka sii baxaan suuqyada waddamada hormaray, haddana dhinaca waddamada soo koraya marka loo eegana waxaad mooddaa iney weli fursadaha xirfadahaasi ay sidooda u jiraan ilaa ay waddamada soo korayo la mid noqdaan kuwa ku hormaraya teknooloojiyadaha casriga ah.
Previous articleDeg Deg, Golaha Guurida Somaliland oo Amaray in la Gubo Buugii uu qoray guray barwaqo,
Next articleXudeyda, oo 140km (90 meyl) galbeed kaga began magaalada caasimadda ah ee Sanca, waxay ahayd magaalada afaraad ee ugu weyn Yemen iyo xarun dhaqaale oo muhiim ah kahor inta aysan mucaaradku la wareegin dabayaaqadii sanadkii 2014.